Shiinaha Nico warshad iyo saarayaasha | Inshare
nidaamka xilkii guddoomiyenimo
Magaca Product: Nico
Description: tuuro qalinka vape
Waxyaabaha: daahir ah Aluminum
awoodda Battery: dhisay-in 280 Mah batari lithum
jiiddo: About 300 la afuufo (Sida laga soo xigtay isticmaalka shakhsi)
faaiidaysta hab: tuuro, tuur ka dib markii la isticmaalayo
miisaan qalinka Vape: 15.4 g
Haanta: 1.3 ml for CBD & e-juice
iska caabin gariiradda Kululaynta: 1.8Ω
Hab-oogada: dhejiyo / qayilo / rinjiga dubida / laga beddeli karaa
MOQ: 100 set, OEM / ODM si baahida 1000 nooc
Shahaadda: CE, RoHS
qalinka New vape hardware madhan la tuuro, waayo CBD ama e-juice
Nico tuuro Vape Pen Instruction
Imaanshaha: Tani waa nooc cusub oo ah qalinka guri la tuuro vape, wax daawaha aluminium, dusha saamayn sticker, qaababka kala duwan ee stickers oo leh qaababka kala duwan.
Kor u qaad oo waxaad nuugi, fududahay in la shaqeeyaan.
xilkii guddoomiyenimo CBD & E-juice: The 1.2ml awoodda taangiga, oo ku saabsan 280 la afuufo. Waa inay xilkii guddoomiyenimo iska tuuri karo in aan la bedeli karaa.
Battery: dhisay-in batari 280mAh, tuuri karo iyadoo la isticmaalayo, uma baahna in ay ka qaadaan, ku tuur ka dib markii la isticmaalayo.
Nico tuuro Vape Pen faahfaahinta
Magaca Product & Model
laga beddeli karaa
ma bandhigay screen
Gebi ahaanba la tuuro, tuur ka dib markii la isticmaalayo
Customized dhadhan midho hodan la Baakadaha midabo dhalaalaya sitaa
1.2 ml for CBD & e-juice
(Dhererka) 94.0 * (Width) 15.5 * (oo dhumucdiisuna waxay) 6.5mm
Dhisay-in Or Dibadda Battery
Capacity Battery (Mah)
280 (dhisay-in 280mAH awooda batariga)
gaadiidka Air, express, iwm
Waa maxay sababta Dooro inshare?
1. R dhamaystiran & D kooxda, injineerada MD, injineerada electronic, injineerada ID, samaynta graphic, ku kulmi karaan ahaanayta OEM / ODM ee macaamiisha kala duwan.
2. natiijada cilmi baarista iyo horumarinta, in ka badan 100 shatiyada la xiriira of e-sigaarka, oo ay ku jiraan 10 shatiyada abuurashadoodii.
3. Waxaan ku biiray oo wada xiriiraa ururada warshadaha e-sigaarka ee gudaha iyo dibadda, iyo aqoon heerka warshadaha farsamo ee gobollada kala duwan ee dunida. Waxaan la qorsheeyo karo waxyaabaha ay tahay in macaamiisha u baahan tahay sida ay fikrad soo jeediyey by macaamiisha. Laga soo bilaabo macluumaad wax soo saarka is-dhaafsiga hore, in design dhexe horumarinta caaryada, imtixaanka tijaabada ka dib, waxaa jira xog ku filan si ay u qiimeeyaan, si loo hubiyo in design sheyga la kulmay saamaynta goynta-qarkii ugu dambeeyay oo inta badan suuqa.
4. Laboratory qalabka qaabeynta: vacuum mashiinka cadaadis xun, mashiinka baaritaanka heerkulka sare iyo mid hooseeya, batari meter content, mashiinka baaritaanka qiiq, Salt mashiinka baaritaanka lagu buufiyo, inaad ahaatid gariirka.
1. Maareeyayaasha leeyihiin celcelis ahaan in ka badan 10 sano oo khibrad ah.
2. Golaha site: site-soo-saarka ee 54,000 ft square 2, 10 khadadka shirka.
3. Boorka-free workshop: 11,000 ft square 2, khadadka 5 shirka, qaadi karta 100 oo shaqaale.
Workshop 4. Isku duritaanka: 32,000 ft square 2, 20 mishiinada wax taaj oo kale duro, CNC / mashiinka dhimbiil iyo qalabka kale ee processing caaryada.
5. qalabka Advanced wax soo saarka: mashiinka sticker automatic, mashiinka saliid buuxinta, mashiinka xardho laser, mishiinka daabacaadda shaashadda.
Control Our Quality
1. Buuxi shahaado nidaamka maareynta ISO9001.
2. qalabka kormeerka Full for line-soo-saarka, inaad ahaatid iska caabin ah, makarafoonka inaad ahaatid dareen, nuugid ahaatid iska caabin ah, imtixaanka USB ku amraya. 100 imtixaanka% ee alaabta line-soo-saarka si loo hubiyo heerka isreebreebka saarka gaadho 99.9%.
3. maamulka sahaydu Perfect, unit maamulka IQC madax banaan, maareeyaan alaabta ceeriin, oo si adag u samayn kormeerka soo socda sida ay caadiga ah AQL1.0 si loo hubiyo in qalabka soo socda buuxiyaan shuruudaha tayada.
4. wax cayriin imtixaanka wakhtiyeysan RoHS, iyo sidoo kale a RoHS sahaydu dammaanad heshiiska si loo hubiyo in dhammaan waxyaabaha soo socda la kulmi heerarka deegaanka EU.
5. nidaamka tayada Perfect si loo hubiyo in aan caadi ahayn oo tayo leh, ka isha of siin in raadraaca ka dib.
wax soo saarka sigaarka 6. E-sigaarka ku maray shahaadada CE / RoHS / TPD EU, iyo sidoo kale la kulmi karo baahida macaamiisha in ay sameeyaan shahaadada aqooneed ee gobolka kasta.
Hardware tuuro CBD
la tuuro Hardware E-Casiirka
Waxaan ka shaqaynaa 24/7, naga soo wac waqti kasta. Haddii aan soo jawaabin waqtiga, waxaan dib u soo wici doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Hardware CBD , E-sigaarka , Hardware tuuro CBD , sigaarka E la tuuro , Original Vape Pen, Hardware E-Casiirka ,